Thunderbird ayaa timid! Tilmaamaha qaar waa dilaa, kuwa kalena waa in la dilaa! | Martech Zone
Thursday, April 19, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Xalay waan rarray Mozilla Thunderbird si loo tijaabiyo. Thunderbird waa Firefox-ka ina-adeer li Macmiilka Emailka. Markaan soo dejiyo mawduuc ama laba oo aan beddelo dhammaan dookhayga, waxaan u helay inuu si fiican u socdo. Waa macmiil emayl aad u fiican, oo leh astaamaha dheeraadka ah ee is-dhexgalka Gmail iyo calaamadeynta.
Tagging waa awood u leh inuu hoos u dhigo ereyada muhiimka ah ee aad sameysid oo aad ugu talagasho shay kasta, kiiskan emayl. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u raadsato oo aad uga heshid waxyaabaha astaamaha aad u qoondeysay. Nice tag… tagging waa wax aan ku aragno maalmahan badan internetka (Waan jeclahay isticmaalka Del.icio.us calaamadeynta URL-yada).
Waxaa jira hal muuqaal oo aan ka helay Thunderbird oo gabi ahaanba i waalatay, in kasta oo… khariidado lagu qoro markii aan soo dejinayo Buuggayga Cinwaanka. Interface-ku waa wax aan faa'iido lahayn oo jahwareer aan dhammaad lahayn.
Si aad u calaamadeyso goob, waxaad ka dooraneysaa galka feylkaaga oo kor ama hoos ugu wareeji si aad ula jaanqaado berrinka ku yaal Thunderbird. Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah markaad udhaqaajiso garoonkaaga kor ama hoos, waxay u wareejineysaa aaggii markii hore halkaas ku yaalay dhanka ka soo horjeedka. Waqtiyada qaarkood, waxay sidoo kale labalaabtay aagagga aragtidayda. Ma hubo cidda ka fakartay qorshahan laakiin waa wax lagu qoslo. Waxay ahayd inay si fudud u yeeshaan sanduuqyo isku dhafan oo leh aagagga Thunderbird. Maaddaama aad ka xulaneyso goob kasta feylkaaga isha, waa inaad si fudud awood ugu yeelataa inaad xulato aagga Thunderbird si aad ugu tashato.
Thunderbird, fadlan DIL interface-kaan xun. Aakhirkii waan ka quustay soo dejinta beerahayga oo dhan oo kaliya magaca iyo cinwaanka iimaylka ayaan soo dhoofsaday. Haddii suuq-geynta xogta ee khibradda keydka macluumaadka ee shirkaddu uusan khariidayn karin meelaha, waxaan maleynayaa inay aad u yar yihiin dadka kale ee hela inay sidan u sahlan tahay in la isticmaalo. Haddii aad rabto dadka inay korsadaan e-maylkaaga macmiilka, waa inaad hubisaa inay si fudud ugu wareejin karaan buugaagta cinwaanadooda hal macmiil una wareegi karaan mid kale. Tani waxay ahayd wax aan macquul ahayn.
Apr 19, 2007 at 6: 48 PM
Qof weyn oo-dee-doo 🙂 Waxaan isku dayey qaaxada dhammaanteed inta ay le'eg tahay oo waligay kama helin wax ku habboon in lagu dheganaado; laakiin markaa anigu ma ihi taageere FF ah sidoo kale.
Markii aan aqriyay in ay ku darayaan a tagista Muuqaal rajo weyn ayaan ka qabay maaddaama ay tani tahay wax aan uga faa'iideystay FeedDemon iyo tagging Technorati. Si kastaba ha noqotee waxa qaaxadu u yeerto calaamadeynta kama badna wax yar uun kala duwanaanshaha Calaamadaha caadiga ah ama qaar ka mid ah nidaamkaas.
Haddii fikradda dhabta ah ee calaamadeynta la hirgaliyay markaa waa inaad awood u yeelataa inaad iyaga u abuurto sidii faylal hoosaadyo iyo / ama aad ku biiri karto faylal hoosaadyo la abuuray oo ku xirnaan kara nidaam xeerar.
Taas macnaheedu maahan inaan adeegsado noocii ugu dambeeyay ee macaamiisha MS sidoo kale. Waxaan helay dookhayga oo kubixiyay $ 20.00 ee InScribe (nooca Linux iyo waliba kudhowaad dekedda Mac ee soo socota) dibna uma aanan eegin tan iyo markaas.
Apr 19, 2007 at 7: 14 PM
Waxaan ahay taageere weyn oo FF ah. Haddii aad sameyso wax barnaamij barnaamij ah, FF waa wax cajiib ah. Waxyaabaha lagu daro ee loo yaqaan 'Firebug' iyo 'Live HTTP Headers' waa kuwo aan qiimo lahayn oo waxay iga caawiyeen inaan helo ton. Waxaan hadda soo raray qalab cusub oo ii oggolaanaya inaan dib-u-cusbooneysiiyo aagagga aniga iyo CSS-keyga sidoo kale… waa baashaal badan
Fursad sii Firefox! Waan qaadan karaa ama ka tagi karaa Thunderbird, in kastoo. Waan ordayaa xoogaa waana soo celin doonaa hadaan helo kala duwanaansho kale oo qabow.
Apr 19, 2007 at 10: 11 PM
Doug .. Waxaan isku dayay FF ​​waqti badan. Xitaa waan rakibay laakiin ma jecli. Waxaan si macquul ah u cayrinayaa sabab la'aan sabab kale mooyee si aan u hubiyo inay cusbooneysiisay.
Ma dhahayo IE7 way ka fiican tahay ama ka xun tahay laakiin waa xulashadayda ugu muhiimsan.
Apr 19, 2007 at 10: 13 PM
Ma jiro wax ka baxsan Borg, Steven. Waad kudarsami doontaa goor dhow ama goor dambe. 😉